DAAWEYNTA ORCHID KA DIB MARKAAD TALLAALKA QAADATID: SABABTA CALEEMAHA U NOQDAAN HURUUD IYO NOQDAAN JILICSANAAN, WAXA LA SAMEEYO, SIDA LOO CAAWIYO DHIRTA GURIGA, IYO GOORMA AYUU UBAXAYAA? - SOOSAARKA DALAGGA
Orchid ka dib transplanting - gaar ahaan daryeelka ee ubax leh raaxo kulul
Orchid waa ubax lagu raaxaysto, taas oo aad u jecel dadka aan jecelahay ee dhirta gudaha. Waqtiga dambe ama ka dib, mid kasta oo ka mid ah waxay la kulantaa baahida loo qabo in lagu beddelo dhirta, sababtoo ah koritaanka caadiga ah iyo ubax firfircoon ee cilad-celinta, waxay u baahan yihiin isbeddel ah substrate iyo karti kasta 2 ilaa 3 sano.
Waa maxay sababta, markaa, dhibaatooyin soo kordhi dhirta dhirbaaxo wakhti dheer oo aan engegin? Jawaabta su'aashan waxaa laga heli karaa maqaalkan, waxa uu sheegayaa waxoogaa yar oo ku saabsan geedi socodka tallaalka, waxaana sidoo kale loo qoondeeyay arrinta siinta xaaladaha ugu wanaagsan ee orchid muddada soo kabashada.
Maxaa ku dhacaya ubax haddii la beddelo?
Khubarada ayaa sheeganaya in transplanting for orchids waa diiqada. Waa wax dabiici ah in dhirta ay jiri doonto markii ugu horeysay, waxaa kale oo suurtagal ah in la joojiyo koritaanka nidaamka xididka iyo caleemaha. Oo hawsha beeraha waa inay fududaato muddadan muddada ubaxa.
Waa muhiim: Waqtiga ugu wanaagsan ee ku-beddelidda orchid waa guga, maaddaama ay tahay guga in xididdada iyo caleemaha geedka ay bilaabaan inay helaan xoog iyo koraan si firfircoon.
Waa waqtigan sanadka in xilliga la qabsashada ee ubaxa dheriga cusub iyo substrate ay ugu gudbaan si badbaado leh. Laakiin mid ka mid ah waa in aan sameeyo wax xakameyn leh orchid inta lagu guda jiro ubax: waxay tuuri kartaa oo dhan ubax iyo burooyinkeeda. Tallaabooyinkaas oo kale waa in lagu dabaqaa xaaladaha ba'an, marka dhirta oo dhan lagu hanjabo dhimasho.
Sidee loo xanaaneeyaa dhirta wax ka qabatay habkan?
Orchid ee walaaca waxay u baahan tahay fiiro gaar ah, iyo daryeel dheeraad ah. Laakiin midna waa in uusan noqon mid aad u xiisa badan: ubax madax furasho ah "ma fahmi karo" dareen-qabad. Si loo helo mudada dib u soo kabashada ubaxa si ay u noqoto mid guul leh, ka dib markii loo bedelo, dhirtu waxay u baahan tahay inay abuurto jawi nabad ah, si ay uga soo kabato dhibaatada walbahaarka leh: Orchid waxaa la dhigayaa qol dabaq leh, iyada oo aanad u guurin meel ilaa meel, si dhexdhexaad ah u cabbirto sida ku habboon nidaam cayiman.
Waa maxay dhibaatooyinka laga yaabo inay soo baxaan iyo sababta?
Xaaladaha qaarkood, sababo aan loo hoggaansamin tiro badan oo shuruud ah ayaa loo gudbiyaa habka loo yaqaan "transplanting" iyo dayactirka dambe ee orchid, dhibaatooyinka qaarkood ayaa laga yaabaa in ay soo baxaan: caleemaha dhirta waxay noqdaan huruud iyo jilicsan, waxaa jira dhibaatooyin gaar ah oo leh koritaanka xididada, muddo dheer ma aha mid ku farxo ubax, waxa la Dhibaatooyinka oo dhan oo liiska lagu qoray, ayaa maqaalku sii socon doonaa.
Orchid kadib isla markiiba ka dib marka dib loo gurto waa in lagu dhejiyaa qolka iftiinka iftiinka loogu talagalay 7 ilaa 10 maalmood. Qolka dhexdiisa looma dhaqaajin karo meel, oo waxaad u baahan tahay inaad doorato boos joogto ah. Ubaxleyda khibrad leh waxay kugula talinayaan: waa ka wanaagsan haddii ubaxa uu ku yaal daaqadda bariga. Qorraxda tooska ah ee caleemaha geedka waa in laga fogaadaa, taas awgeed, daaqada waxaa lagu duugi karaa filim mataaneed ah.
Ka taxadar qaabka heerkulka: heerkulbeegga heerkulbeega ee qolka waa inuusan kor u kicin calaamadaha + 20S + + 22S.
Waraabinta ugu horreysa ka dib marka lagu tallaalay waa in la sameeyaa 4-5 maalmood kadib, xigta - oo aan ka horeyn 14 maalmood. Heerkulka biyaha lagu taliyay waa + 35S- + 40S.
Waqtigani waa lagama maarmaanka u ah ubaxa si ay u helaan wakhti ay ku bogsiiyaan waxyeelada ubaxa ee la helay markii ay u guurto weel kale. Sidoo kale Soo dhaweyntan oo kale waxay fursad u siinaysaa inay hoos u dhigto khatarta ah in la weeraro nidaamka xididka ee murgaasiyadaha pathogenictaas oo dhab ahaantii u keeni doonta cudurka epiphysin.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo loo biyo dhigi karo orchid. Beeraley qibrad leh waxay ku talinayaan ilaysiga ugu horreeya ka dib markii lagu tallaalay si ay u soo saaraan gargaarka qubeyska, taas oo abuuraysa wax la mid ah roobab kuleyl ah. Tani:
Ubax waxaa lagu dhejiyaa qubeyska iyo il biyo ah heerkul ka sareeya biyaha qolalka ayaa loo diraa.
Ka dib markaa, dhirta ayaa weli ku jirta musqusha 15 - 20 daqiiqo si ay u daadiyaan biyaha xad dhaafka ah.
Caleemaha waa in ay sameeyaan ka dib qaabsocodka noocan oo kale, tirtir dharka.
Waxaad dhigi kartaa orchid oo dheriga ku dhejin kartaa berkedda biyaha, ka dibna waxay gashaa substrate iyada oo godadka hoose iyo derbiyada weelka. Qaab kale ayaa ah in biyo ka dhuuban laga bilaabo biyo waraabin ilaa biyuhu ay bilaabaan inay ka soo baxaan godadka. Xaalad muhiim ah - hubso inaad iska daadiso dhammaan biyaha dhaadheer dheriga!
Maareynta maalinlaha ah ee caleemaha leh biyo kulul leh oo la kariyey oo ka dhalatay dhalada buufin, kaas oo gacan ka geysanaya in la dedejiyo habka bogsashada nabarrada lagu qaato inta lagu guda jiro xubinta taranka. Xaaladdan oo kale, hubi inaad hubiso in dhibcaha biyaha aysan ku sii soconin axooyinka caleenka. Muddada celceliska muddadan waa 1 bilood. Waqtiga la doorbidayay ee buufinta waa subaxa hore. Haddii cimiladu aad u kululaato, markaa waxaa la kordhin karaa tirada laysku daro maalin walba.
Wax yar oo ku saabsan waraabinta. Wixii orchids, waa inaad isticmaashaa oo keliya biyo jilicsan ama biyo dhexdhexaad ah oo leh pH5. Si loo caawiyo go'aaminta tilmaamahaan waxay noqon karaan ubaxlaha ilbaxsan (fiiri lakabka miisaanka qashin-qubka: inta badan waa, qadarka sare) iyo tilmaamuhu. Wixii ugu dambeeya waxaa haboon in aad tagto dukaanka ubaxa gaarka ah, halkaas waxaad ka iibsan kartaa oxalic acid, taas oo ah 1/8 tsp. 5 litir oo biyo ah ayaa kaa caawin doona inaad la qabsato adkaanta.
Waxaan kugula talineynaa inaad daawato fiidiyowga ku saabsan waraabinta ugu horeysa ee orchids ka dib markii laga beerto:
Tan iyo substrate cusub ayaa hodan ku ah nafaqooyinka, beeralayda ubaxa leh waayo-aragnimo kugula talinaysa inaad marka hore quudiso orchid ka hor bil ka dib. Intaa waxaa dheer, nidaamka xididka inta lagu jiro transplantation ma si buuxda u nuugi karaa dhammaan nafaqooyinka, kaas oo uu ka baqayo abuurista microflora xun ee dheri ah.
Dharka ugu sareeya waxa fiican in la isticmaalo diyaargarawyo adag oo loogu talogalay kaliya orchids. iyo iibsaday dukaanka ubaxa. Tusaale ahaan, "Kemira Lux" (1g halkii litir oo biyo ah) ama "Bona Forte" (10 ml halkii 1.5 litir).
Si kastaba ha ahaatee, ma noqon doonto mid aad u adag in dib loo akhriyo tilmaamaha Bacriminta kuwan. Foostada soo baxday waxay waraabisay orchid ilaa wakhtigaas oo ay biyuhu ku daraan substrate waxayna bilaabaan inay ku shubaan digsiga. Dharka ugu sareeya waxaa la sameeyaa inta lagu jiro xilliga koritaanka firfircoon ee dhirta, taas oo ah, marka caleen cusub la sameeyay.
Maxaa la sameeyaa haddii aad dhibaato qabto?
Waxyeellada farsamada ee xididdada inta lagu jiro tallaalka.
Kufsi ama xoqin adigoo sababaya biyo aan habboonayn.
Yaraanta xididdada hawada.
Galka qorraxda tooska ah ee caleemaha geedka ama dusha hawada kulul.
Cunto badan oo ka mid ah Bacriminta.
Waxa la sameeyo:
Haddii xididdadu ay waxyeello u geystaan, waxaa lagula talinayaa inay ka baxaan dhirta qaboobaha muddo labo saacadood ah, ka dibna ku rid weel biyo leh diiran oo la kariyey muddo 1 saac ah, ka dibna meel dhig.
Qalitaanka xididada si fudud ayaa loo baabi'iyaa waraabka dhexdhexaadka ah ee warshadda.
Yaraanta hawadu waa la baabi'iyaa iyagoo abuuraya godado dheeraad ah derbiyada dheriga iyagoo gacan ka helaya ciddiyaha kulul ama cirbadaha xiran.
Haddii ubaxu helo qorraxda tooska ah iyo hawada kulul, warshadda waa in loo wareejiyaa meel kale oo "badbaado leh".
Rootiga Root waxaa la baabi'iyaa oo keliya qaaxo cusub. Laakiin ka hor intaanad soo saarin orchid ku jirta substrate cusub, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh dib ugu eegto dhammaan xididdada la gooyey (ay yihiin madow ama bunni) waa in la gooyaa maqaayad fiiqan ama xiirto maqaarka caafimaadka leh, nadiifinta qaybaha leh qoraxda ama kaarboonka firfircoon, geedka waa in lagu duugaa dherer yar .
Haddii ay dhacdo in la ogaado cayayaanka, waa inaad isla markiiba bilowdo daaweynta geedka.
Waxaan kugula talineynaa daawashada fiidiyowga ku saabsan sababaha qalajinta orchid-ka iyo qalqalinta ka dib markii lagu tallaalay:
Labada waraaqood ee aan ku filnayn iyo xad dhaafka ah waxay dhejin karaan geedka jaalaha ah.
Galka qorraxda tooska ah ee geedka.
Heerkulka hawada oo hooseeya, qabyo joogta ah.
Xakamee heerkulka qolka.
Si looga fogaado gubashada ka imaanaya caleenta qorraxda tooska ah waxaa lagama maarmaan ah in dib loo habeeyo ubaxa meel kale.
Adkee habka biyaha. Tani waxay gacan ka geysan doontaa in la kormeero nidaamka nidaamka asaasiga ah (xididdada dhirta caafimaad leh ee substrate qoyan waxay leeyihiin midab cagaaran oo cagaaran, iyo dhul qalalan - lacag-cagaaran) iyo substrate. Waxaa intaa dheer, waxaa muhiim ah in dareenka la saaro lakabka korkiisa oo keliya, laakiin sidoo kale waa mid "qoto dheer". Ha ilaawin joogitaanka qasabka ah ee hoose ee godadka dhoobada ee socodka biyaha.
Guddi: Haddii dhirta lagu dhex daro weel dabac leh, markaa geedi socodka waraabinta waa in la buuxiyaa by dheecaan xad-dhaaf ah, markaad dhulka ku haysato gacantaada.
U sugitaanka orchid si aad u barbardhigto nidaamkan ka dib, waxaad u baahan tahay inaad u dulqaadato: inta u dhexeysa marxaladda soo gelista xididada cusub iyo muuqaalka kore ee peduncle ee ugu horeeya waxay qaadan kartaa waqti dheer (badanaa laga bilaabo 6 ilaa 24 bilood xaaladaha qaarkood - waxay ku xiran tahay kala duwanaanshaha orchid iyo xaaladaha ay abuurtay).
Xaaladaha heerkulka khaldan.
Badan iyo caymis la'aanta.
Waraabinta xad dhaafka ah.
Xakamaynta kiimikada ubaxa. Caanaha ugu caansan waa Epin (subax kasta maalin walba buufinayaa ama waraabiyaa hal mar toddobaadkiiba 3-5 dhibcood oo ah diyaarinta biyaha) iyo xalka succinic acid (2 g halkii 1 -2 l oo biyo ah).
Dhibicda heerkulka. Si loo sii daayo caleemaha ubaxa, mararka qaarkood warshad waxay u baahan tahay inay diyaargaroobto: u qaado habeenkii, tusaale ahaan, balakoonka (+ 18C), ka dibna u qaado qol diiran.
Xaddidaadda waraabinta. Sameynta "abaarta" waa mid aad u fudud: biyo 3 ilaa 4 maalmood oo isku xiga, ka dibna joojiya waraabinta 2 toddobaad.
Isticmaal nalalka: orchid wuxuu jecel yahay iftiin badan.
Ka soo horjeeda fikrado badan oo ku saabsan madaxbannaanida orchid, ha ka baqin boogta! Waa muhiim in la waafajiyo dhammaan shuruudaha geeddi-socodkan iyo in la siiyo ubax xaaladaha lagama maarmaanka u ah dib-u-soo-kabashada muddada ka dambeeya diiqada ay soo mareen. Ka dibna ubaxa mucjiso waxay ku farxi doontaa milkiilaha leh ubaxyo jilicsan muddo ka badan hal sano.